के हो कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ? - NHEICC National Health Education Information Communication Center
के हो कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ?
आफू र अरुलाई बचाउने तरिका
यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
के मानिसमा जनावरहरूबाट नोभल कोरोना भाइरस संक्रमित हुन सक्दछ?
के नोभल कोरोना भाइरस र SARS एउटै हुन्?
मानिस कसरी यो भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् भन्ने बारेमा आज सम्म वैज्ञानिक तवरले पुष्टी भएको छैन। हाल यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
के यो एक व्यक्त्तिबाट अर्को व्यक्त्ति सर्न सक्दछ?
यस भाइरसको संक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ?
सामान्यतः यस भाइरसको संक्रमण कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा एकिन जानकारी छैन। तथापि रुघा, खोकी तथा श्वासप्रश्वासका बिरामीको नजिक नजाने तथा हातको सरसफाई नियमित गरेमा संक्रमणको सम्भावना कम रहन्छ ।
के कोरोना भाइरसको लागि उपचार छ?